Dhalashada Nabigeenna- DHAGEYSO | Radio Muqdisho
Dhalashada Nabigeenna- DHAGEYSO
Published on January 22, 2013 by Admin 2 · No Comments · 3,902 views
Waxaan ku jirnaa bisha Rabiicul Awal oo ah bishii uu 12 keeda dhashay nabigeenna Muxammed NNKH, Nabigii ugu dambeeyay ambiyada ilaahey , kaas oo uu Eebbe weyne u soo saaray in noolaha ka badbaadiyo baadinimada kuna hago Tubta Toosan ee uu ilaah raalliga ka hayay.
Waa bishii uu dhashay Nabigii Naxariista ee uu Ilaahay ku yiri: Waxaad dunida u tahay naxariis, uuna ku tilmaamay raxmad badane.
Nabi Muxamed Nabad gelyo NNKH, waxa uu Caalamka soo gaarsiiyay Risaaladii eebbe u soo dhiibay ee ay ku idlaayeen wax kasta oo wanaagsan.	Waxa uuna ifka ka tegay isagoo caddeeyay wax kasta oo madmadow uga jiray ummadda.
Nabigeennu waxa uu tusaale u ahaa Akhlaaqda wanaagsan, Ilaah ayaana taas ku ammaanay, waxa uuna ummaddiisa u jeexay dhabbe haddii ay maraan ku dhammaanaya jannada.
Ka hor intii uusan geeriyoon, ayuu dadka kula dardaarmay inaysan dhiig iska daadin, In aysan is xaqirin, In aysan isku xad gudbin . waxa uuna ku baaqay in dumarka loo turo, xoolaha xaaraanta ahna la iska daayo.
Ilaahow ma gaarsiiyay? Ilaahayow markhaati ka noqo! War midkiinna joogaahi kan ma qan ha gaarsiiyo!. Sidaas ayuu kula dardaarmay ummaddii goobjoogga ka ahayd khudbadii Xajatul Wadaac.
Haddaba Maxaan ka fulinnay ama ka hir gelinnay dhaqammadii wanaagsanaa ee nabigeenna lala soo diray uuna na soo gaarsiiyay, mise ka harnay xumihii uu naga reebay?
Waa Mowduuca toddobaadkan oo uu marti noogu yahay Sheikh Cali Sheekh Maxamuud “Dheere” oo ka mid ah culimada ugu caansan dalka. ka dhageyso linkigan hoose.
TUBTA TOOSAN 21.01.2013